Caawinta Ganacsiga yaryar ayaa ka cararaya wajiga Dhibcaha
Golaha Waddada Lake Street waxay u adeegtaa, u adeegtaa, waxayna u doodaan beesha Ganacsiga Lake Street ee Minneapolis si loo hubiyo in ay ku noolaadaan barwaaqada iyo barwada ganacsiga. Maalin kasta, Golaha Waddada Lake Street wuxuu ka shaqeeyaa qorista ganacsiga, amniga iyo amniga, shaacinta / suuqgaynta / marketing, munaasabadaha bulshada, isgaadhsiinta internetka iyo albaabka ilaa albaabbada, keydinta tamarta ganacsiga iyo keydinta tamarta, u doodista ganacsiga yaryar, iyo maareynta caasimada Lake Street iyo kheyraadka dabiiciga ah. Barnaamijyadooda badan waxay kor u qaadaan ganacsiga bulshada ee hadda jira iyada oo kor u qaadaysa wacyiga ka dhex jira dukaamada iyo maalgashadayaasha cusub. Golaha Waddada Lake Street wuxuu helayaa taageero guud oo ka socota barnaamijka McKnight ee barnaamijka Gobolka & Bulshooyinka sababtoo ah doorka ururka ee dhiirigelinta xaafadaha dhaqaale ee firfircoon.
Golaha Waddada Lake Street ayaa hagayay East Lake Street East Street Street iyada oo loo marayo qaar ka mid ah sanadihii ugu adkaa badnaa iyo waqti cusub oo ganacsi ah. Saddex sano oo dhismo waddo ah, oo ay ku xigto hoos u dhac, waxay keentay in ku dhawaad 25% qiimaha ganacsiga bannaan ee ku yaal qaybta Longfellow ee East Lake Street. Ka dib markii ay bixiso gargaarka yareynta ganacsiga inta lagu jiro dhismaha waddooyinka, oo soo jiidatay habka loogu talagalay habab badan oo feker ah ee lagu xakameynayo Waddada Dhexe ee Dhexe, dhawr sano ka dib, Golaha Deegaanka Lake Street ayaa u jeeday dib u dhiska. Golaha Waddada Lake Street ayaa kor u qaadey barnaamijka barnaamijka sii-haynta ganacsiga, oo kaashanayey Golaha Bulshada Longfellow iyo Redesign Inc. si ay u tabiyaan maal-gashadayaasha si loo beegsado guryaha, waxayna bilaabeen dadaallo suuq-gareeyn ah si ay macaamiisha u keenaan waddada.
In ka badan 22 ganacsi oo cusub ayaa laga furay aagga tan iyo 2012-kii. Dhawaan dhow, Golaha Deegaanka Lake Street wuxuu taageeray furitaanka Peppers iyo Fries, oo ay bilaabeen aabaha iyo gabadha Steve iyo Marie Frias. Ganacsiga makhaayadda ayaa ku jira dhiigooda - awoowe Steve wuxuu furay makhaayaddii ugu horeysay ee Mexico ee Minnesota. Steve iyo Marie waxay dib u cusbooneysiiyeen saldhiga shidaalka ee bannaan oo xayeysi u ah xaafadda muddo dhawr sano ah. Golaha Waddada Lake Street waxay gacan ka geysteen caawimaad farsamo, taageerida suuq-geynta, iyo xiriirinta ilo dhaqaale. Mashruucan waxaa ka mid ahaa maalgelin ka timid BankCherokee, Metropolitan Consortium of Developers Community, Xarunta Horumarinta Deriska, iyo Magaalada Minneapolis Barnaamijka Dib-u-hagaajinta Dhismaha Weyn. Makhaayadda ayaa shaqaaleysiin doonta 32 qof. Taasna waa hal tusaale oo ka mid ah sheekooyinka aad ka heli kartid xaafaddan xiisaha leh.